Dowladda Imaaraadka Carabta oo diyaarado u soo diraysa qaar kamid ah maamulada Soomaaliya.
April 8, 2021 Xuseen 9
Ururka Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inay bilaabayaan Duullimaadyo dhanka Hawada oo Somalia lagu soo gaarsiin doono Gargaar Aadminimo, xoghayaha guud ee ururka Bisha Cas ee dalkaasi, Dr. Maxamed Catiiq Al-Falaxi ayaa sheegay inay u soo dirayaan 4 Diyaarado wada Gargaar, si wax looga qabto guud ahaan Xaalladda Bani’aadanimo ee Somalia ka jirta.
Afqashuushle Haku qaldamin magaca Somaliland jamhuuriyada barakaysani marna ka mid maaha wadanka fashilmay ee loo yaqaan Somali failed state. somaliland waa dal iyo dad isku tashaday oo aan waxba uga baahnayn caawimada emirateka faasidka ah. Somalia iyo wanlawayn ayaa ku nool caawimo debedeed oo 60% budgetkeeda European Unionku ay bixiyaan markaa edeb yeelo oo shut up.
Haddii aadan doonayn inaan Somalia lagugu lammaanin xor baad u tahay doonitaankaaga laakiin inaadan u baahnayn gargaarka Imaaraatka iyo mid kaleba, maxaad faantay! Illeen af carrab iyo labo daan leh hadal ma daayo!
Si wanaagsan ayaad ugu sharaxday jamhuuriyada barakeysani SOMALILAND kama mid ah DALKAA FASHILMAY SOMALIA.
Marwalba ugu celceliya iloowshahaa iyo fowdada ayaa ka badatay walaalaha Dalka aynu dreiska nahay Somalia in 30 sano kahor lagu kala tegey midnimadii bugta iyo huuhaada ahayd midhaheediina aynu wada Aragno.
Qoladii Midnimo bugta iyo beenta iyo munaafaqada la ordeysey Waa kuwaa XAARKOODA Walaaqanaya mudo 40 sano ku dhow Somalia.
Qoladii Daacadnimo,wadanimo,xilkas, murti iyo caqli iyo aqoon intaba wadateyna waakuwaa Is muujiyey iyadoo Cidina caawin ILAAHAY WAAXIDKA AH TALO Saartay,Gunta hoosta kasoo bilaabay Waxkasta dowlad adag iyo qof iyo cod iyo Nabad iyo isqadarin iyo
isu Tanaasul iyo dal jacayl ku Naaaloonaya Somaliland.
Geediga wadaay Guushuna way dhawdahay.
Hadeynu nahay dhalinta somaliland aynu u ducayno walaalaheenaa Somalia in Ilaahay dalkooda u hagaajiyo Caqliguna kusoo noqdo
Umadoodaa masaakiinta ahna u naxaan iyo dalkoodan Baylaha ah ee hilbaha wadhan.
Inshalah Aamiin Aamiin Aamiin.
Sxb si fiican ayaad u dhigtay ilaahayna muwaafaqo ha siiyo arimohooda ay Ku xalistaan.
Somalia waa dal gacanta u galay 1969 dictator,afduubayna xoriyaadkii muwaadiniinta,dhib iyo hagardaamo badan oo nidaamkaasu u geystayna shacabkii Ku hoos noolaana shacab ay horkacayaan jabhadihii xaq ubdirirka soomaaliyeed ayaa ka adkaaday,waxaynuna qori caaradii dib ugu hananay dawladnimadii aynu Ku darsanay oo Ku salaysan xuduudeheedii lixdankii,waxaynu kasoo bilownay meel ibir ah maantana guul ayaynu joognaa,waxaynuna qabsanay wax milyan jeer ka badan waxay qabatay dawladihii soo xukumay dalkeena intii dalka la wada ahaa,umana baahnin maanta,bal waabaynu ka raysanay,kuna caano maalnay go’aankii aabayaasheen Ku saxeen khaladkii awoowayaasheen ee MIDOWGA,maantaba waa muuqataa caqliga dadka aynu wax Ku darsanay,waana kuwaas jaho la’aanta noqday,iskuna qataaran,wax isu afgatana la hayn.
ILAAHOW MAHADDAA INAAD NA HALEESHIISAY GO’AANKA SAXDA AH.
Somaliland waa dawlad iyada iyo walaalaha UAE waxay u wada xidhiidhaan hab dawladnimo.
Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa deeq raashin ah ka koobaan shan iyo soddon tan soo gaadhsiisay xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland .Safiirka dawladda Imaaraadka u fadhiya magaalada Hargeysa ee Caasimada Jamhuuriyadda Somaliland, Danjire Abdulla Alnaqbi ayaa sheegay in xilliga oo ay soo gelayso bisha barakaysan ee ramaadaanay garteen in deeqdan ay soo gaadhsiiyaan xukuumadda si loo gaadhsiiya dadka danyarta ee aan haysan awood ay raashin ku iibsadaan.Guddoomiyaha ha’yadda udiyaar garowyga afooyinka iyo kaydka raashinka , Faysal Cali Sheekh oo ka guddoomay dawladda imaaraadka kaalmadan ayaa sheegay in dawladda imaaraadka ay Somaliland la tahay saaxiib dhaw islamarkaana ay deeqada sida uga haboon u gaadhsiinayaan dadka danyarta ah .Faysal Cali sheekh ayaa sheegay in kaalmadan ay ku timid codsi ay ha’yaddaafooyinka iyo kaydka raashinku u gudbisay xukuumadda Imaaraadka, waxaanu xusay in dalka ayka jiraa abaaro ba’an”dalka waxa ka jira abaaro ba’an oo dhul faro badan ayey baahi ka jirtaa oo dadbadan ayey haysaa , kaalmadan waa mid koobaan oo shan iyo soddon tan ah waxaanan gaadhsiin doona dadka baahan haddii alle idmo ” ayuu yidhi
Imaraadka cawin kamarabno
Anagu dowlad baan lanahay
Imaardku mahan wadan aan
Kunaqaano ixsaan hadii uu
Somali saxiib layahay dowlada
Somalia ayuu laxariiri
Lahaa laakin lugoyo un
Baan kunaqaanaa immaradka
Somali waa dal qani ah laakin
Carabtaa isku kaaya dirtay
Hadana waan fahanay
Kkkkkkkkk. Kooxdan la baxdey jamhuuriyda barakeysan ee Somaliland waa sheeko aan 2ax ka jirin waan og nahay waxa ka jiro maamul goboleedka Somaliland iiidorku iney hilfaha is heystan dhaqaalo xumi maceyshada oo qaali ah iyo boob xoogan oo ka jira dadka deegankana at ka soo cararayan dhibka meesha ka jira. MAAMUL GOBOLEED SOOMALILAND WAA MAAMUL KA TIRSAN DOWLADA FEDERAL KA SOOMALIYA caqliga saliimka ha shaqeeyo
War runto waxa weeye in beel Soomaaliya ka mid ah aysan Soomaaliya ka bixi karin,wax jira gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo ah qayb ka mid ah 18 kii gobol ee Soomaaliya.
Beenta iyo qiyaaliga ah maaweekada lago seexiyo kuwa uu ka buuxo nacaybka qaranimada Soomaaliya way soo dhamaan.
Seddex ( 3) magaalo iyo ma ahee inta kale shacabka degen waqooyiga Soomaaliya waxa ay ka tirsanyihiin Soomaaliya kuwa harayna iyaga danto keeni in dadkooda dhibaca ka raacaan.
Waxaa jira hal dal oo ah Soomaaliya xuduudiisunatahay min saylac ilaa raas kaambooni,Raad casaytr ilaa Baled xaawo,waana arin aan marna gorgortan galayn,si kastaba lago difaacayo oo calanka buluuga ah uu shaki kuma jiro in uu ka dul baban doono dhamaan geyga gobolada waqooyi ee Soomaaliya mar aan dheerayn.
Guul iyo gobanimo Soomaaliya.
Somaliya xagay ku taal horta, ma tan xalane looga taliyaa mise waa midkale adeerayaalow beenta iyo khiyaaliga iska daaya wax somaliya ladhahaa maba jidho. Somaliland maxaa laga rabaa dantooda ayay raacdeen waana ku faaiideen waayo waa ku habsaami lahaayeen in Xalane looga taliyo sida ay Puntland ugu habsaantay. Somaliya markay burburtay oo bakhtiday lagana quustay reer Puntland inta maamul samaysteen ayay tii somaliyana dooneen soona celiyeen iyakoo naf iyo maal u horay maxaase loogu abaal guday oo aan cay iyo nacayb ahayn. War somali waa wuxuush aan abaal lahayn dantoodana aan aqoon.somaliland horay uga tagtay somaliya soona noqon mayso abadan Puntland waaba is diyaarisay quusbayna joogtaa waana baxaysaa ayadaana kasii fogaandoonta somaliland cadaawada la tusay awgeed waxa kaliya oo ka dhexeeyay Puntland iyo somaliya waxa weye magaca guud isna dhimay oo ini fargaajo ayaa god dheer ku riday. Axmed madoobe qudhiisa faraajaduu la baxay markaa somaliya wax la yiraahdo ma jiridoono ee yaan been laydiin sheegin.